Ndị na-emepụta electrode China RP Graphite na ndị na-eweta ya | Hongqiqu
Oke ikuku alumina refractory brik
Ihe nnọchi anya nke Arc Foaming nke ihe ndozi ahihia
Ihe eji eme ka igwe na - emeghari ahihia
Refractory Magnesia Gunning na-arụzi ihe maka Ele ...
Aluminium abrasive nkecha maka igwe anaghị agba nchara
Ihe omuma ihe eji ese ihe
Graphite Electrode bụ nke kachasị maka ndị na-arụ nchara n ’ụlọ ọkụ, ọkụ na-ere ọkụ na ebe nchekwa ọkụ na-eguzogide. Ihe eserese sekọndrị na-ebunye ọkụ eletrik n'ime ọkụ. Ọkụ eletrik na-amịpụta arc na mpaghara na-agbaze n'ime ebe a na-agba ọkụ eletrik, mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye ka ihe dị ka ọkwa ruru 2000, ọkwa amalite. Anyị usoro nke eserese nke eserese nke etinyere na-ahụ maka ọkụ a na-ahụkarị na akwa ọkụ dị elu na nnukwu mgbali na mkpụmkpụ mkpumkpu.
:Dị: Anyị nwere ike iweta electrode dị ọcha dị ọcha. Enwere ike inye ike mgbe niile, ike dị elu na ike dị elu na-enye ọkụ elekere anya. A na-enye electrode dị mma na nhazi ya nke ọma ka ọfụma. Enwere ike ịrịọ nha ọbụla onye ahịa ahụ chọrọ.
Ngwa: A na-ejikarị ya eme ihe maka ịgbanye ọkụ na-ere ọkụ ka ọ gbazee nchara a wụrụ awụ ma jiri ya rụọ ọrụ dị ka ebe a na-ahụ ọkụ dị ka AOD VOD LF n'ime igwe nchara na igwe anaghị agba agba.
Uru: Electrode graphite ka a na-ejikarị n'ọhịa na ígwè. Ọ na - eme ka mmetọ na - erughị ma na - echekwa ike karịa, ọ dị mma maka gburugburu anyị. Igwe ihe osise na-ahụ anya na-arụ ọrụ ogologo oge, ebe ọ bụ na-ekwesịghị ịgbanwe ya mgbe ụfọdụ, na-ebelata oke ọrụ nke ọrụ ma na-ezere nnukwu ihe egwu.
Nke gara aga: HP Graphite electrode
China Graphite Electrode Rp Hp Shp Uhp